स्वास्थ्य / जीवनशैली | mulkhabar.com
काठमाडौं, ३१ असार । सरकारी अस्पताल भन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा फोहोर, अव्यवस्थित र भीडभाडको तस्बिर आइहाल्छ। केही अस्पताल भने तपाईंहामीले सोचेभन्दा भिन्न र व्यवस्थित छन्। तिनैमध्येको एउटा हो नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती अस्पताल। सफा, चिटिक्क अनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित छ अस्पताल। सोमबार बिहान १० बजे नै अस्पतालमा बिरामीको भीड थियो। बिरामी र कुरुवालाई बस्ने राम्रो व्यवस्था छ। […]
Posted in मुख्य समाचार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
काठमाडौं, २६ असार । पटक पटक आमरण अनसन बसेर चर्चित बनेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले फेरी अनशनको चेतावनी दिएका छन् । डा. गोविन्द केसीले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै अनसनको चेतावनी दिएका हुन् । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको […]
काठमाडौं , २० असार – गाउँमा जन्मीएर शहर पसेपछि गाउँलाई माया गर्ने र गाउँमै फर्कन चाहने मानिसहरु कमै होलान् । त्यसैमध्येमा पर्दछन् प्रो.डा. मथुरा केसी । पाल्पाको एक गाउँमा जन्मीएर विद्यालय तहसम्मको अध्ययन गाउँमै गरेका डा केसी भारत, वंगलादेश, श्रीलंका, इरान, पाकिस्तान र अमेरिकामा पढेर उत्कृष्ट चिकीत्सक र कन्सल्ट्यान्ट भइ धेरै वर्ष काम समेत गरे […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार,एक्सक्लुसिभ समाचार,मुख्य समाचार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
काठमाडौं, ३ असार । प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुमा मोटोपनको समस्याले खुबै सताउन थालेको छ । भर्खरका युवाहरुको पनि अन्य सबै भाग फिट भएतापनि पेट भने पुत्लुक्क बाहिर निस्किएको हुन्छ । हुन त घरमा आमाबाबा छोरो या छोरी मोटाए भनेर खुशि हुँदा हुन् तर यसले बिभिन्न प्रकारका रोगलाई समेत निम्तो दिन्छ । त्यसैले पेट […]
काठमाडौं , २० जेठ – महिलाहरुको वास्तविक अवस्था उनीहरुले अनुहारले बोलिरहेको हुन्छ । यो कुरामा कति पुरुषहरु चनाखो हुन्छन् अथवा भनौँ उनीहरु अनुहारको अवस्था हेरेर महिलाको वास्तविक परिस्थितिको आकलन गर्न सक्छन् । पुरुषहरु महिलालाई विश्वास गरे गरुन् नगरे नगरुन् तर महिलाहरुले कुनै न कुनै रुपमा ढाँटिरहेका हुन्छन्, एक अध्ययन भन्छ । कतिपय अवस्थामा परिस्थितिमाथी कब्जा […]
सावधान ! सरकारी अस्पतालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग र बेचबिखन गर्न पाइन्न
नारायण ढुङ्गाना/ काठमाडौँ, २० वैशाख । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन २०६८ ले व्यवस्था गरेअनुसार काठमाडौँका ठूला सरकारी अस्पतालबाट सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग र बेचबिखन निषेध गर्न लागिएको छ । ऐनले व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिकरुपमा लागू हुन नसकेकाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको अगुवाइमा पहिलो चरणमा काठमाडौँका ठूला १० अस्पतालमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको […]
काठमाडौं, १४ बैसाख – अहिलेको बजार भाउअनुसार एक पैसामा अण्डा किन्न पाइन्छ ? चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पताल खरिद इकाईले पत्याउनै नसकिने भाउमा खाद्यान्न खरिद गरेको भेटिएको छ  । अस्पतालले चिनी, बिस्कुट, तेललगायत खाद्य सामग्री एक रुपैयाँमा खरिद गरी बिरामीलाई खुवाइने खानाको गुणस्तरमै शंका उब्जाइदिएको छ  । अस्पतालले वैशाख १ गते रासन सामग्री […]
युएई, ५ बैसाख । भैरहवा अञ्चरपुकी सरिता गिरीको बुबाको अघिल्लो वर्षको माघमा निधन भयो । विदेशमा कार्यरत गिरी बुबाको निधन हुँदा तत्काल घर जान सकिनन् । कारण थियो, घरेलु कामदारलाई छुट्टिमा आएपछि पुनः र्फकन नपाउने सरकारी नीति । सरिता ५ वर्षदेखि युएईमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छिन् । देशमा बसेर परिवार पाल्न कठिनाइ भयो । […]
Posted in प्रवास मुख्य,मुख्य समाचार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
प्रहरीले खोल्यो बीर ओपिडीको ताला, डाक्टरले आँगनमै जाँचे बीरामी
काठमाडौं, २७ चैत । तीन दिनदेखी बन्द रहेको वीर अस्पतालको ओपीडी कक्ष आजबाट खुलेको छ । ओपीडिमा आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरहरुले लगाएको ताला प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाएको हो । प्रहरीले ताला खुलाए पनि डाक्टरहरुले कार्यकक्षमा बिरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण भने गरेका छैनन् । उनीहरुले आँगनमै बीरामीको उपचार गरेका छन् । सबै सरकारी डाक्टरहरुलाई केन्द्रमा समायोजन गर्न […]